Uphando lweMakethi olungenakufikeleleka olusuka kwizixhobo zeNtengiso Martech Zone
Uphando lweMakethi olungenakufikeleleka olusuka kwiziXhobo zeNtengiso
NgoMvulo, Oktobha 3, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Kwinyanga ephelileyo uZoomerang wajoyina Martech Zone njengomxhasi wethu wetekhnoloji. Sibe nexesha elimnandi sisebenzisa eyabo izixhobo zophando ezilula kwaye, ngaphezu kwako konke, ukufunda indlela yokuyila iipolls kunye neesaveyi ezivelisa iziphumo. Kuze kube kudliwanondlebe lwethu nabantu abakhulu kwiqela labo apho sibonileyo ukuba uZoomerang wayengaphezulu kwesisombululo sophando, nangona kunjalo.
IKHAMPANI engumzali Izixhobo zeNtengiso unikezela ngeenkonzo zoyilo kunye nokuzaliseka kophando. Kuba isezantsi njenge- $ 1499, abafundi bebhlog yeMartech banokusebenzisa iinkonzo zeNtengiso. Izixhobo zeNtengiso zinabantu abangaphezulu kwezigidi ezi-2 abakulungeleyo… kwaye ungahlulahlula ngokwendawo okanye ngokwejografi! Oko kuyabiza kakhulu ngeenkonzo zoPhando lweNtengiso!
Wamkelekile kwiNtengiso ye-imeyile iBlog Sponsor Delivra!
Ukuthengisa umxholo weB2B: Isikhokelo seGrande esivela kwi-Eloqua